Qodobbada - World March
Bogga ugu weyn » crowdfunding
Mashruucani wuxuu si gaar ah ugu maal-galiyaa tabarucaadka dhaqdhaqaaqayaasha iyo iskaashatada. Xubin kasta oo ka tirsan Kooxda Tababarka ayaa iska leh maal-galintooda. Waxay kaloo wadashaqeyn la leedahay kharashaadka hoyga, dayactirka iyo gadiidka wadada. Waxaa la soo jeedinayaa in kooxaha dhiirrigeliya Meelkasta oo ay ka shaqeeyaan ayaga ayaa iska kaashan kara qeyb kamid ah hoyga iyo kharashaadka nolosha.
Ujeedadu waa hammaan sababtoo ah Kooxda Base waxay doonayaan in ay u safraan wadamada 100 ee ka yimaada dhamaan qaaradaha. Laakiin Kooxda Tababarka uma tiirsanaan doonto dhaqaale ahaan shirkad kasta, dawlad ama mid wadajir ah, si aanay u haysanin meelayntooda ama dib u dhajinta.
Si aan u sii wadno madax-bannaanida, waxaan ku weydiisaneynaa caawimaad, inaad la shaqeysid ficilkan oo lagu kordhiyo taageerada cusub ee loo yaqaan 'loo yaqaan'.
Waxaan sameyn doonaa waxa aan awoodno sida waafaqsan taageerada aan heysano. Ilaa iyo intaa ka dib ayaan imaan doonaa.
Sidaas awgeed waxan ka shaqeynaa World First March iyo wax kasta oo aan ku dhicin waxaynu heleynaa.
Halkaas ayaan ku xaqiijinay markii aan ku xirno sabab wanaagsan sababtoo ah waxaan dhamaanteen noqoneynaa waxyaabo badan oo la isku halleyn karo.
Waxay gacan ka geysataa bixinta khidmadda marinka adduunka.
Tallaabooyin Heerka 15.000
Waxay bixisaa 10 km ee socodka iyada oo loo marayo 10 euro.
Tani waxaa ku jiri doona magacaaga internetka oo waxay na siin doontaa awoodda aan ku socon karno kiilo dheeraad ah.
Tallaabooyin Heerka 75.000
Waxay bixisaa 50 km ee socodka iyada oo loo marayo 50 euro.
Waxaan ku siin doonaa a xirmo la yaab leh, oo leh waxyaabo mareeg ah si ay u muujiyaan dareenkaaga kuwa kuugu dhow.
Intaas waxaa dheer, tani waxay ku jiri doontaa dhammaan abaalmarinta heerka tallaabooyinka 15.000 waxayna na siineysaa xitaa awood dheeraad ah oo ay u sii socon karto masaafo dheeraad ah.
Tallaabooyin Heerka 150.000
Waxay bixisaa 100 km ee socodka iyada oo loo marayo 100 euro.
Heerkani magaciisa ayaa ka muuqan doona, ma aha oo kaliya webka, laakiin sidoo kale qayb ka mid ah mahad gaar ah ee Book of 2ª March March.
Intaa waxaa dheer, waxaan ku dareynaa dhammaan faa'iidooyinka heerarka tallaabooyinka 75.000, iyo suurtogalnimada socdaalka safarka ah ee lagu mahadnaqayo iskaashigaaga
Tallaabooyin Heerka 262.000
Waxay bixisaa 175 km ee socodka iyada oo loo marayo 175 euro.
Heerkan waxaan ku siin doonaa buug rasmi ah oo ka socda 2F World March adiga oo kugula mahadceliyay Kooxda Tababarka oo aadna ka muuqan doonto qaybta mahad celinta gaarka ah.
Intaa waxaa dheer, waxaan ku dari doonaa dhammaan faa'iidooyinka heerka heerarka 150.000 iyo kuwa hore.
Tallaabooyin Heerka 337.500
Waxay bixisaa 225 km ee socodka iyada oo loo marayo 225 euro.
Heerkan waxaan ku siin doonaa siyaabo dheeraad ah nuqul wanaagsan oo ka mid ah buugga rasmiga ah ee bartamaha Maraykanka ee ugu dambeeyey Maarso.
Intaa waxaa dheer, tan waa inaad ku darto, dhammaan abaalmarinta heerka tallaabooyinka 262.000 iyo hore!
Tallaabooyin Heerka 450.000
Waxay bixisaa 300 km ee socodka iyada oo loo marayo 300 euro.
Heerkaan waxaan kugula socodsiin doonnaa inta kale ee abaalmarinta heerarka tallaabooyinka 337.500 iyo hore, ee mugga cajiibka ah ee South America Maarso ku noolaa dhowr sano ka hor.
Tallaabooyin Heerka 750.000
Waxay bixisaa 500 km ee socodka iyada oo loo marayo 500 euro.
Soo qaado dhammaan buugaagta la daabacay ilaa taariikhda Maarso oo ay ku jiraan buugga hore iyo tan koowaad ee 1ª World March iyo hubi horumarka sanadahan 10 ee ugu dambeeyay.
Marka xigta heerkan, waxaad sidoo kale heli doontaa dhammaan abaalmarinta heerka tallaabooyinka 450.000 iyo kuwa hore.
Tallaabooyin Heerka 1.500.000
Waxay bixisaa 1.000 km ee socodka iyada oo loo marayo 1.000 euro.
Heerkan waxaan ku siinaynaa dhammaan abaalmarinnada suurtagalka ah, buugaag dhamaystiran oo buuxa, xusuusta buugaagta iyo webka.
Iyo sidoo kale calaamad muujinaysa mahadnaq dheeraad ah waxaan kuu sameyn doonnaa inaad soo gudbiso A xusuusta cajiib ah ee 65 x 95 cm iyada oo faahfaahin kasta oo ku saabsan sida ay u soo baxday guuleysatay 2ª World March.
Miisaanka guud ee abaalmarinta
Thanks to our canshuur bixiyeyaasha